MLK: Ujeeddada Waxbarashada - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Shaqada waxbarashadu waa in la baro qofka inuu si qoto dheer u fikiro una fekero si qoto dheer. Laakiin waxbarashada ku joogsata waxtarka waxay cadeyn kartaa khatarta ugu weyn ee bulshada. Dembiilaha ugu halista badan waxaa laga yaabaa inuu yahay ninka hibada u leh caqliga, laakiin aan anshax lahayn. ”
Xuska Dr. King ee Puerto Rico & bilaabida ilo waxbarasho oo cusub oo ku saabsan MLK
January 23, 2020 CV, Warar & Muuqaal 0
Xusaska Dr. King ee Puerto Rico waxaa lagu calaamadeeyay mudaaharaadyo, isu-imaatin bulsho-bulsheed oo caalami ah, iyo dib-u-fikiridda dhaxalka xag-jirka ah ee MLK. Kheyraad waxbarasho oo cusub, "Xididdada Xagjirnimada ee Isbeddelka Bulshada: Beyond Khuraafaadka MLK", ayaa sidoo kale la bilaabay. [sii wad akhriska…]
'Ku soo bandhig nabada, xalinta khilaafaadka manhajka waxbarashada' - Zambia
June 29, 2017 Warar & Muuqaal, Siyaasadda 0
Xubin ka tirsan baarlamaanka Zambia Mwansa Mbulakulima (PF) ayaa ku baaqday in la soo bandhigo nabada iyo xalinta khilaafaadka manhajka waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Martiqaad ku biirinta xigashooyinka si aan u Taageerno Mashruuceenna Buug-qorista Wax-barashada Nabadda
April 11, 2018 Warar & Muuqaal, Quotes 3
Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada ayaa aruurinaya xigashooyin dhiirrigelin ah oo ku saabsan waxbarashada nabadda si looga dhigo buug-gacmeedka buug-gacmeedka memes iyo fikradaha muhiimka ah ee duurka ku jira. Buugga waxaa loogu talagalay inuu yahay ilaha guud ee buug-gacmeedka iyo sidoo kale qalab loo adeegsado tababarka macallinka ee waxbarashada nabadda. The memes dhameystiran yihiin qalab si ay uga caawiyaan faafinta wacyiga waxbarashada nabada. [sii wad akhriska…]
Poke Jrseager wuxuu leeyahay,
March 2, 2021 at 3: am 27
waan jeclahay tan!